မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Tokyo Disney Sea2(သို့) ဂျပန်ခရီးစဉ် Day 4
Posted by mabaydar at 10:42 AM
အသေးစိတ် ရေးထားတော့ ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့့ကောင်းပါတယ်။ အပိုင်း၃လည်း မျှော်နေပါမယ်။
ခွင့်မတောင်းဘဲ လင်ခ့်ထားတဲ့အတွက်လည်း တောင်းပန်ချင်ပါတယ်
is this disney promotion ?
မဗေဒါလေးရေ လာလာဖတ်နေတယ်နော် စာရေးတော်တော်ကောင်းတယ် မြင်ကွင်းတွေ ကို တစ်ခုချင်း မြင်နေရတယ် စာဖတ်ကတည်းက စာဖတ်သူကို စေတနာထားတာ တော်တော်သိသာတယ် ကိုယ်တိုင် ရောက်သွားသလိုမျိုး သေသေချာချာ ပြောပြပေးတာ တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်
ကျွန်မလဲ သရဲအိမ်ထဲရောက်ရင် အသားကုန် အာခေါင်ခြစ် အော်တာပဲ သရဲတောင် လန့်တယ် ဘေးက တစ်ယောက်လဲ နားအူသွားတယ် ပြောတယ်
ရွက်လွင့်ခြင်း - လင့်ခ်ထားတဲ့အတွက် တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူး... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
Anonymous - u think so?? Do u think that i need to especially promote Disney? Disney itself is already so crowded and have to Queue so long. I wish less people go there.
မဆုမွန် - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
တကယ်ရောက်လိုက်ရသလိုပါပဲ..မဗေဒါစီးခဲ့တဲ့ မီးတောင်ထဲက ရထားနဲ့ ဆင်တူတာ ကျွန်မတစ်ခါစီးဖူးတယ်..မဗေဒါရေးထားတာလေးအသက်ဝင်လွန်းလို့ အဲဒီတုန်းကကျွန်မ ရဲ့အဖြစ်ကို ပြန်သတိရတယ်..အဲဒီရထားလေးစီးနေတုန်း မှာ ကျွန်မ လွင့်ထွက် ပြီးသေသွားမလား ဆိုပြီး ကြောက်လိုက်တာ..သူများတွေ အော်နေကြတာ နာတောင်အူတယ်..ကျွန်မကတော့ ဘုရားကိုပဲတနေတယ်..ဘုရားသခင် သမီးနဲ့အတူရှိနေပေးပါ..သမီးမသိလို့ စီးမိတာပါ..ဒီလိုအရာမျိုး သမီးတစ်သက်လုံးမစီးတော့ပါဘူး ဆိုပြီးအကြိမ်ကြိမ် ဆုတောင်းနေမိတယ်..အပြင်ရောက်တော့ ကိုယ့်ခြေထောက်တောင်မသယ်နိူင်သလောက်ပဲ..ကျွန်မကကြောက်တတ်လို့ပါ..
ညလေးက blog post ရေးတာလားကြွားနေတာလား
အဲဒါကတော့ စာဖတ်တဲ့သူရဲ့ ခံယူချက်ပေါ်မူတည်ပါမယ်... သူများခရီးသွားပိုစ့်ကို အကြွားခံနေရတယ်ထင်ရင်လဲ အကြွားခံလိုက်ပေါ့ကွယ်... အကြွားခံနေရတယ်လို့ မမြင်တဲ့သူတွေကတော့ အေးအေချမ်းချမ်းပဲ နေနိုင်တာပေါ့ကွယ်... ဒီလောက် လွယ်တဲ့အဖြေကို မေးနေစရာလိုသေးလားဟင်...
Thank for ur post,I also want to go there.:)